Global Voices teny Malagasy » Tarika hip-hop iray tsy mitendry afa-tsy zavamaneno nentim-paharazana mba hanorenana kolontsaina Kazakhstani vaovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Febroary 2021 8:53 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Noubel Nandika Candy
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Mozika, Tanora, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina
Saripikan’ny horonantsary fanadihadiana iray ao amin’ny fantsona YouTube  an’ny Balu KZ, mampiseho ny fomba fampiasàn’ny tarika The Buhars ny zavamaneno nentim-paharazana Kazakh mba hamokarana hira telo.
Ao Kazakhstan, firenena ao Azia Afovoany izay manankarena solika, dia mbola ny mponina ambanivohitra no maro an’isa nefa dia ahilikiliky ny fiarahamonina izy ireo, ary lazain’ireo avara-pianarana ao an-drenivohitra fa “vendrana”. Ankehitriny, ity tetikasa andrana ara-mozika ity dia miezaka manova izany fanilikilihana ny kolontsaina ambanivohitra izany, amin’ny alalan’ny fandraisana sy fanovàna ny harenan’ny kolontsainy ara-mozika, ary ny fampidirana izany amin’ny kolontsaina Kazakhstani vaovao izay mampiombona kokoa ny rehetra.
Tamin’ny Desambra 2020, tao Almaty, renivohitra ara-kolontsain’i Kazakhstan, dia niray hina tamin’i Nargiza Shukenova, mpamokatra sy mpandalina kolotsaina ireo mpanakanto Chokan Nukushev sy Emil Dosov, mba hamokarana hira telo ao amin’ny tarika The Buhars, tetikasa andrana mikendry ny hanaporofo fa azo atao tsara ny mamokatra hira manaraka ny toetr’andro amin’ny alalan’ny zavamaneno nentim-paharazana Kazakh.
Dosov, mpanakanto, dia nanazava tamina antso tamin’ny Zoom niarahana tamin’ny Global Voices ny fomba nitsanganan’ity tetikasa tsy dia mahazatra ity:
Nivory izahay dia nanapa-kevitra ny hampiasa ireo zavamaneno nentim-paharazanay. Maro ireo tetikasa ao Kazakhstan manao izany fampifangaroana izany, rehefa mampiaraka ny zavamaneno nentim-paharazana amin’ny hira vaovao izy, ka mamokatra jazz na mozika elektronika avy eo, ohatra. Koa satria efa misy izany, dia nieritreritra aho hoe aleo ny mifanohitra amin’izay mihitsy no atao: alaina ny hira ankehitriny, ary tendrena amin’ny zavamaneno nentim-paharazana izany, toy ny hoe mbola tsy nisy mihitsy ireo fitaovana tandrefana, na tontolo tandrefana.
Mahazendana ny vokatra, araka ny heno ato amin’ity hira ity, “үндеме”, izay midika hoe “Aza miteniteny!” amin’ny teny Kazakh:
Namokatra hira iray hafa amin’ny teny Kazakh ny tarika, “Теңіз ” (Ilay Ranomasina), sy iray amin’ny teny Rosiana, “Новый мир ” (Tontolo Vaovao). Ho an’ny rindran-kira, dia nanasa mpitendry zavamaneno nentim-paharazana Kazakh izy ireo hitendry, ary noraketina tamin’ny solosaina ny feon’izany ka namboarina mba hahazoana ireo “effets” ilaina.
VAKIO : Ny fomba hanarenan’ny tanora ao Kazakhstan ny kolotsaim-pireneny 
Nandritra izany dia hitany ireo karazana zavamaneno Kazakh maro be, izay ahitàna karazana amponga, zavamaneno misy tariby  ary ny harpa fitendry amin’ny vava . Azonao jerena izany ato amin’ity horonantsary ity (manomboka amin’ny minitra faha-24, rehefa hitanao etsy ambanin’ny sary ny sary famantarana ireo zavamaneno), izay misy fanadihadiana ny The Buhars amin’ny teny Rosiana:
Vàhana ara-kolontsaina sy maha-izy azy
Ankoatra ny maha-andrana ara-mozika ity tetikasa izy, dia mampametra-panontaniana goavana ny The Buhars: ny fahatakonan’ny ambanivohitra Kazakhs anatin’i Kazakhstan ankehitriny.
Ity firenena ity, izay azo atao hoe lehibe, vitsy mponina ary manan-karena solika, no firenena faha-valo lehibe indrindra  maneran-tany. Manodidina ny 18 tapitrisa ny mponina ao aminy, ary manodidina ny olona 7 isaky ny km² ny hatevin’ny mponina, salan’isa iray amin’ireo ambany indrina maneran-tany . Izy ihany koa no mitàna ny tahirin-tsolika faha-12 manara-penitra indrindra maneran-tany , izay mahatonga ny faritra indostrialy sy ny tanàn-dehibe mahasarika mponina betsaka noho ny fitadiavan'asa tsara sy faripiainana ambony kokoa.
Na izany ary, ny antsasan’ireo foko Kazakhs – izay maherin’ny 60 isan-jaton ’ny mponina ao amin’ity firenena manana foko maro ity – dia mbola mivondrona any ambanivohitra Kazakh, any amin’ireo tanàna kely. Araka ny antontan’isa farany, dia maherin’ny 40 isan-jaton’ny mponina , ny ankamaroany dia Kazakhs, Uzbeks ary Uyghurs, no monina any ambanivohitra, izay tsy mitsaha-mitombo  ny elanelana ara-toekarena misy eo aminy sy ireo tanàndehibe.
Vokany, maro ireo mponina ambanivohitra, indrindra ireo tanora , no miezaka mifindra monina any amin’ireo tanàndehibe  toa an'i Almaty, Nur-Sultan, Shymkent, Aktobe, Karaganda – toerana manana fitsipika ara-kolontsaina sy ara-pomba fiteny. Matetika izy ireo dia miteny rosiana ary tsy dia mivavaka loatra raha mitaha amin’ny ambanivohitra, ary na dia mora mahita asa aza ny tanora, dia any amin’ny sisin’ny tanàndehibe izy no monina, noho izy voahilikilik’ireo tandrenivohitra izay afaka manavaka azy amin’ny fomba fiakanjony, fomba fiteniny, na ny finoany Silamo.
Manazava i Dosov:
Kazakhstan dia iray amin’irony firenena izay monina ivelan’ny tanàndehibe ny atsasan’ny mponiny – ary ampifandraisina amin’ny ambanivohitra foana ny zavamaneno nentim-paharazana, amin’ireo olona tsy nahafoy ny tanindrazany. Dia manana ity nofinofy ity indray izahay hoe, Kazakhs koa isika, saingy voafatotra amin’ny simenitra, amin’ny làlana, ka miezaka mitady ny toerana tokony hisy antsika. Any an-tanàndehibe, toa manery antsika hanary ireny zavatra taloha ireny ny zavamisy; mila zava-baovao isika, mitovy amin’ny an’ny Tandrefana na ny firenena arabo toa an'i Dubai. Tsy mila ireny zavatra ntaolo ireny isika, fa nahoana ary? Azontsika atao ny manao irony hira vaovao irony amin’ny alalan’ny zavamanenontsika.
Misarika ny saina amina olana iray hafa koa ny The Buhars: ny fakàn-tahaka ara-kolontsaina. Mazàna ny zavamaneno nentim-paharazana dia fampiasa amin’ny zava-masina any amin’ny kolontsaina ambanivohitra, ka natahotra ny tarika tamin’ny voalohany hoe sao ho raisina ho toy ny fanimbazimbàna ny hira vokariny. Mieritreritra anefa izy fa tokony horaisina am-pitoniana kokoa izany lafiny izany, satria ireo zavamaneno ireo dia efa nampiasaina tamina fotoana tsy fanaovana fomban-drazana, toy ny fampisehoana “hira nentim-paharazana” nandritra ny vanimpotoana sovietika.
Manampy i Nukushevna fa ampiasaina amin’ny andavanandro ihany koa ireo zavamaneno Kazakh ireo, toy ny fitaovana fampitàna hafatra mahatsikaiky.
Ny tarika, izay efa nihira tsy nisy an’i Shukenova tamin’ny 2009 hatramin’ny 2013 tamin’ny anarana hoe Buhar Jerreau (ho fahatsiarovana ilay poeta Kazakh Бұқар жырау  an’ny taonjato faha-18) ary mozika hip-hop , no tena nataony tamin’izany, dia tsy mbola nanapa-kevitra raha hanohy ny andrana na tsia.
Ankoatra ny traikefa azo tamin'ny fiaraha-miasa tamina mpanakanto maro, dia nilaza i Dosov fa ny zava-dehibe indrindra hita tamin’izany dia ny “fisokafana tamina tontolo vaovao azo hakàna hevitra maro dia maro”, raha nahatsapa kosa i Nukushev fa “nanao adidy tamin’ny firenena ny tarika […] amin’ny fandraisana anjara amin’ny fametrahana lova ara-kolontsaina.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/26/151314/
 Ny fomba hanarenan’ny tanora ao Kazakhstan ny kolotsaim-pireneny: https://globalvoices.org/2020/06/10/how-kazakhstans-youth-are-forging-their-own-national-identity/
 zavamaneno misy tariby: https://www.youtube.com/watch?v=eE1Db3vnZHU
 harpa fitendry amin’ny vava: https://en.wikipedia.org/wiki/Jew%27s_harp
 firenena faha-valo lehibe indrindra: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_area
 iray amin’ireo ambany indrina maneran-tany: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population_density
 tahirin-tsolika faha-12 manara-penitra indrindra maneran-tany: https://www.iea.org/reports/kazakhstan-energy-profile
 maherin’ny 60 isan-jaton: https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan#Ethnic_groups
 maherin’ny 40 isan-jaton’ny mponina: https://vlast.kz/novosti/36646-naselenie-kazahstana-prevysilo-186-mln-celovek.html
 tsy mitsaha-mitombo: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813013815
 indrindra ireo tanora: https://www.thebusinessyear.com/kazakhstan-2016/living-for-the-city/focus
 Бұқар жырау: https://en.wikipedia.org/wiki/Bukhar-zhirau_Kalmakanov
 mozika hip-hop: https://www.youtube.com/watch?v=iCV_N51yUU4